व्यापारसम्बन्धी बारम्बार सोधिने प्रश्‍नहरू | नेपालस्थित अमेरिकी दूतावास
नेपालस्थित अमेरिकी दूतावास
अमेरिका बाहिर स्थायी ठेगाना भएका तर अस्थायी रूपमा (जस्तै पर्यटन, उपचार, व्यापार, अस्थायी रोजगार वा अध्ययनका लागि) अमेरिका जान चाहने व्यक्तिलाई जारी गरिने भिसालाई गैरआप्रवासी भिसा भनिन्छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा स्थायी बसोबास गर्न चाहने विदेशी नागरिका लागि ।
अमेरिकामा भ्रमण तथा पर्यटन
अमेरिकाको यात्रा गर्नुहोस्
अमेरिकी नागरिक सेवा
आकस्मिक सेवाको आवश्यकता परेका अमेरिकी नागरिकले कृपया ०१-४२३-४००० मा सम्पर्क गर्नुहोला ।
कार्यालय समयपछि ०१-४२३-४००० मा सम्पर्क गर्नुहोला ।
नेपाल बाहिरबाट ०१-४२३-४००० मा सम्पर्क गर्नुहोला ।
अन्तर्राष्ट्रिय बाल अपहरण
अमेरिकी नागरिकको गिरफ्तारी
अमेरिकी नागरिकको मृत्यु
आकस्मिक आर्थिक सहायता
राहदानी तथा नागरिकता
बालबालिका तथा परिवारसम्बन्धी मुद्दा
अमेरिकी नागरिकका लागि अतिरिक्त स्रोतसाधन
आन्तरिक राजस्व सेवा (अमेरिकी कर)
सेलेक्टिभ सर्भिस रजिस्ट्रेसन
अमेरिकी नियोग नेतृत्व
राजदूत र्‍यान्डी बेरी
नियोग उप-प्रमुख म्यानुएल पी. मिक्‍कलर, जुनियर
अमेरिकी सरकार नेतृत्व
संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति
संयुक्त राज्य अमेरिकाका उपराष्ट्रपति
अमेरिका र नेपाल
नीति तथा इतिहास
विदेशी सुरक्षा सल्लाहकार परिषद्
आर्थिक तथ्याङ्क तथा प्रतिवेदनहरू
अमेरिकामा व्यापार सुरु
शिक्षा तथा संस्कृति
अमेरिकामा उपलब्ध गुणस्तरीय उच्च शिक्षाका अवसरहरूको बारेमा जान्नुहोस्, जुन संसारको अन्य कुनै पनि भागमा पाइँदैन ।
नेपालमा अमेरिकन स्पेसेज
शैक्षिक तथा सांस्कृतिक मामिलासम्बन्धी कार्यक्रम
नेपालस्थित लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसको कार्यालय
अमेरिकी दूतावास काठमाडौँ
दूतावासमा रोजगारीको अवसर
अमेरिकी सरकारद्वारा एन्टी-रेट्रोभाइरल (एआरभी) औषधीको आपत्कालिक हस्तान्तरण
पिस कोरद्वारा नेपालमा कार्यरत स्वयंसेवकको अस्थायी फिर्ती
नोभल कोरोना भाइरसको महामारीबाट नेपाली जनतालाई सुरक्षित राख्‍न अमेरिकी सरकारबाट थप १८ लाख डलर प्रदान
नेपालमा नोभल कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न अमेरिकी सरकारद्वारा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान
वैदेशिक सहायतासम्बन्धी कठिन प्रश्‍न अवश्य सोधौँ
संविधान गतिशील प्रक्रिया हो
मार्टिन लुथर किङ्ग जुनियर : अहिंसा र अमेरिकी संविधान
हरेक दिन नारी दिवस
नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीबाट इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एन्ड सोसियो-इकोनोमिक रिसर्च (आइएसएसआर) मा प्रस्तुत मन्तव्य
पूर्व सांसद मञ्‍च, नेपालद्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा क्लिङ्टन एस. “ट्याड” ब्राउनले दिनुभएको मन्तव्य
व्यापारसम्बन्धी बारम्बार सोधिने प्रश्‍नहरू
गृहपृष्ठ	गृहपृष्ठ | व्यापार | व्यापारसम्बन्धी बारम्बार सोधिने प्रश्‍नहरू
काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासमा यु.एस. कमर्सियल सर्भिस (USCS) को कार्यालय छ कि छैन ?
छैन । नेपालमा यु.एस. कमर्सियल सर्भिसको कार्यालय छैन । USCS अफिसले प्रदान गर्ने अधिकांश सेवाहरू दूतावासको पोलिटिकल/इकोनोमिक अफिसले प्रदान गर्दछ । उक्त अफिसले मुख्यतः अमेरिकी सामान तथा सेवाका निर्यातकर्ताहरूलाई सेवा प्रदान गर्दछ, यद्यपि नेपालमा लगानी गर्न चाहने अमेरिकी व्यावसायहरूलाई पनि सहयोग प्रदान गर्दछ । पोलिटिकल/इकोनोमिक अफिसले इच्छुक अमेरिकी व्यावसाय एवम् व्यक्ति विशेषलाई परामर्श समेत प्रदान गर्दछ ।
मेरो अमेरिकी कम्पनी छ र म नेपालमा सामान निर्यात गर्न चाहन्छु । म कहाँबाट सुरु गरौँ ? नेपाली बजार बारे कहाँबाट जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ ?
अमेरिकी दूतावासले वार्षिक रूपमा अद्यावधिक गर्ने गरेको नेपाल कन्ट्री कमर्सियल गाइड (CCG) मा नेपालमा व्यापार गर्ने ’bout बृहत् जानकारी तथा विश्‍लेषण उपलब्ध गरिएको छ । यसका अलावा नेपालमा व्यापार गर्ने ’bout जानकारी प्राप्‍त गर्नका लागि अमेरिकी व्यावसायहरूलाई पोलिटिकल/इकोनोमिक अफिसमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरिन्छ ।
कुन-कुन उद्योगका क्षेत्रमा सबैभन्दा राम्रा अवसरहरू छन् ?
नेपाल कन्ट्री कमर्सियल गाइडमा नेपालमा अमेरिकी निर्यात तथा लगानीमा अग्रणी भूमिका खेल्ने क्षेत्रहरूको नाम सूचिकृत गरिएको छ । सम्भावित क्षेत्रहरूका अलावा हामी अमेरिकी कम्पनीहरूलाई नेपाली अर्थतन्त्रको अन्य क्षेत्रहरूमा रहेका अवसहरूप्रति पनि अवगत रहन सुझाव दिन्छौं । आफूले प्रदान गर्ने विशेष वस्तु वा सेवाका लागि बजारमा के कस्ता अवसरहरू छन् भन्ने ’bout जानकारी प्राप्त गर्न कृपया पोलिटिकल/इकोनोमिक अफिसमा सम्पर्क गर्नुहोला ।
के मेरो निकासीका सामानमा कुनै किसिमको आयाती बन्देज लागू हुन्छ ?
तपाईंको सामानमा कुनै किसिमको आयात शुल्क वा कर लाग्ने नलाग्ने ’bout बुझ्न वा भन्सारसम्बन्धी परामर्श चाहिएमा कृपया पोलिटिकल/इकोनोमिक अफिसमा सम्पर्क गर्नुहोला ।
नेपाली कम्पनीको लागि वित्तीय/व्यापारिक रेफरेन्स कहाँ प्राप्त गर्न सकिन्छ ?
पोलिटिकल/इकोनोमिक अफिसले तपाईंको सम्भावित व्यावसायिक साझेदारको बिक्री दर, मुनाफा आँकडा र अन्य जानकारी लगायत उसको क्षमता, वैधता तथा आर्थिक शक्ति ’bout छानबिन गर्नसक्छ ।
मेरा सामानहरू प्रचारप्रसार गर्नका लागि नेपाली व्यावसायिक प्रकाशनहरूको सूचि कहाँ प्राप्त गर्नसक्छु ?
नेपालमा आफ्नो सामान वा सेवाको प्रचार प्रसारका लागि सबैभन्दा प्रभावशाली माध्यम भनेको स्थानीय पत्रपत्रिका, एफ.एम. रेडियो र टिभीमा विज्ञापन दिनु रहेको छ । प्रमुख सञ्चार माध्यमहरूको सूचीको लागि नेपाल कन्ट्री कमर्सियल गाइड (CCG) हेर्नुहोस् । आफ्नो उद्योग क्षेत्रसम्बन्धी जानकारीको लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ राम्रो स्रोत हुनसक्छ ।
के अमेरिकी दूतावासले नेपाली कम्पनी विरुद्धको उजुरी समाधान गर्न मलाई मद्दत गर्नसक्छ ?
यदि तपाईंको कम्पनीलाई कुनै नेपाली कम्पनीसँग कार्य गर्न कठिनाइ भइराखेको छ भने कृपया पोलिटिकल/इकोनोमिक अफिसमा सम्पर्क गरी कठिनाइको अवस्था’bout विस्तृत विवरण, सम्पर्क विवरण तथा समस्या समाधानका लागि गरिएका असफल पहलहरूको दस्तावेजी प्रमाण पेश गर्नुहोला । हामीले तपाईंको मुद्दाको विश्‍लेषण गरी तत्अनुरूप सहायता प्रदान गर्नेछौं ।
मलाई कानूनी सल्लाहको खाँचो छ । मैले नेपालमा भएका ल फर्महरूको सूची कहाँ प्राप्त गर्नसक्छु ?
तपाईंलाई ल फर्महरूको सूची चाहिएमा कृपया पोलिटिकल/इकोनोमिक अफिसमा सम्पर्क गर्नुहोस् । हामीले तपाईंलाई नेपालमा रहेका मुख्य ल फर्महरूको सूची प्रदान गर्नसक्छौं । कृपया ख्याल गर्नुहोस् सूचीमा भएका फर्महरू काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावास वा अमेरिकी सरकारको कुनै पनि निकायद्वारा सिफारिस गरिएको भनी नबुझ्नु होला ।
नेपालमा अवस्थित अमेरिकी कम्पनीहरूको सूची कहाँ प्राप्त गर्न सकिन्छ ?
पोलिटिकल/इकोनोमिक अफिसले तपाईंलाई नेपालमा अवस्थित मुख्य-मुख्य अमेरिकी कम्पनीहरूको नाम प्रदान गर्न सक्दछ ।
नेपालमा व्यापारका अवसरहरू खोजी गर्न आउँदा भिसा चाहिन्छ ?
चाहिन्छ । तर तपाईंले छोटो अवधिको पर्यटक भिसा नेपाल आगमनमा पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ जसअन्तर्गत तपाईंले सीमित रूपमा व्यापारिक गतिविधिहरू गर्न सक्नुहुन्छ ।
नेपाल भ्रमण गर्ने सबैभन्दा उत्तम समय कुन हो ?
वसन्त र शरद ऋतु नेपाल भ्रमणको लागि सबैभन्दा राम्रा समय हुन् । वर्षा यामबाट जोगिएकै राम्रो । वर्षा याम जुलाई देखि सेप्टेम्बरमा पर्दछ र उक्त समयमा देशभित्रको यात्रा कठिन हुनसक्छ ।
नेपालमा अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्स छ कि छैन ?
छैन । तर नेपाल–अमेरिका चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्री (NUSACCI) चाहिँ छ र दूतावासले विगतमा भारतस्थित अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्ससँग सहकार्य गरेको छ ।
डेप्युटी पोलिटिकल/इकोनोमिक चिफ:
डेभिड बी. तलक
Tel.: +977 1 423 4000
उद्यमीकी लागि स्रोतहरू
व्यवसायीलाई उपयोगी लिंकहरू
अमेरिकी दूतावास काठमाडौँ Maharajgunj, Kathmandu, Nepal Tel.: 977-1-423-4000 Fax: 977-1-400-7272
यो नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासको आधिकारिक वेबसाइट हो । अन्य इन्टरनेट साइटमा पुर्‍याउने बाहिरी लिङ्कलाई त्यहाँभित्र व्यक्त भएका विचार तथा गोपनीयता नीतिहरूप्रति हाम्रो समर्थन छ भन्ने अर्थमा बुझ्नु हुँदैन ।